फेक न्युज आतंकः न्युज हाेइन, भ्युजमा ध्यान
धेरै पहिला न्युयोर्करमा एउटा माथिको शीर्षकको लेख पढेको थिएँ । तर, अहिले गुगल गर्दा भेटिनँ। उक्त लेखका लेखकले पत्रकारको रूपमा करिअर सुरु गर्दाको कथा थियो । त्यो कुनै मिडवेस्टको राज्यको एउटा पत्रिका थियो, इन्टरनेट युगअघिको ।
लेखहरूजति सबै हावा । उदाहरणका लागि, 'अस्ति जर्मनीको लोवर स्याक्सोनी राज्यको ब्रेमर्हावेन सहरमा मिस एन्जेला ब्रेट दाँत दुखेर जँचाउन डाक्टर म्याक्सिमिलिआन कुटको क्लिनिकमा गइन् । डाक्टरले दाँत निकाल्नुको सट्टा गल्तीले उनको पूरै जिब्रो निकालिदिए।'
यसो भनेर नक्कली जिब्रो नभएको मुखको फोटो टाँसेर उनीहरूले पत्रिका छाप्थे । जर्मनीको राज्य, शहर, नाम सबै हो जस्तो लाग्ने, तर सबै घटना कल्पना गरिएका । यस्ता सनसनी खोज खबर भएको पत्रिका धेरैले पढ्थे । बिक्री राम्रो हुन्थ्यो । मान्छेले फेक न्युज मन पराउँछन् भनेर अहिले त अमेरिकामा आनिअनलगायतका फेक न्युजका पत्रिका नै छन् । फक्स न्युजले पनि बेलुका प्राइम टाइममा अब न्युज नराखीकन भ्युज मात्र भएका शो राख्ने रे भन्ने सुनेको छु। न्युजमा फक्सका दर्शकको रस नै छैन; सबै भ्युज र फेक न्युजको माग गरेर बसेका छन् ।
त्यसो त नेपालमा म हुर्कँदै गर्दा पनि फेक न्युजको बिगबिगी थियो । हिन्दी कादम्बिनीमा आएका हावा खबर उल्था गरेर नेपालीमा छाप्ने पनि गरिन्थ्यो । सरकारी गोरखापत्रले छाप्ने युवामञ्चमा चीनमा मरेको मान्छेलाई कुनै जीवन रसमा राखेर जिउँदो बनाइयो, अमेरिकामा कुनै पुरुष गर्भवती भए र केही समयमा नै बच्चा पाउन लागेका छन् भन्नेदेखि एलियनहरू आएर अमेरिकाको एरिजोना राज्यको कुनै मानिसलाई लिएर गएको र फर्कने बेला भएको जस्ता खबरहरू पढियो । कतिपय त फोटोसहित हुन्थे । मान्छेका नाम दिइएका हुन्थे । नाम ठेगानासहित दिएका छन्, गलत त के होला ? जस्तो लाग्थ्यो ।
आजकाल यो फेक न्युजको र न्युजको सट्टा भ्युज पस्कने आतंक खबरहरूमै देखिन थालेको छ। खबरहरूभित्रै प्याराग्राफका प्याराग्राफ भ्युज देखिन्छ । लामो समयसम्म मैले पुरुष गर्भवती भएको, मरेको मान्छेलाई जिउँदै बनाउन सकिएको जस्ता खबर पत्याएको थिएँ । अहिले पनि कसलाई कसको दलाल भन्नेदेखि विदेशी लगानी आयो भने देश कंगाल हुन्छ भन्नेसम्मका फेक न्युज पत्याउँदै हुर्कने नेपाली युवा कति हुने हुन् ? (अर्थशास्त्री विश्व पाैडेलकाे फेसबुकबाट साभार)
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ १५, २०७७, १०:१२:००